"Otu narị afọ nke ịnọ naanị" nke GG Márquez n'etiti akwụkwọ ndị kachasị agụ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
"Otu narị afọ nke ịnọ naanị" nke GG Márquez n'etiti akwụkwọ ndị kacha agụ
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu na-enweghị iche na Gabriel García Márquez Ọ bụ ndị na-agụkarị akwụkwọ akụkọ Spanish-American na-ede akwụkwọ n'oge niile, anyị anaghị "atụ ụjọ" ịbụ ndị na-ezighị ezi. Ọ deela ọtụtụ akwụkwọ na nke ka mma, mana o doro anya na akwụkwọ ya kachasị agụ "Otu narị afọ nke owu ọmụma", bipụtara na 1967.
"Otu narị afọ nke owu ọmụma" bụ akwụkwọ edemede akara nke ọganihu na masterpiece nke kpokọtara n'ezie. Ọ na-akọ akụkọ nke ngụkọta nke ọgbọ asaa nke otu ezinụlọ na-akpagbu site na njedebe na-egbu egbu, nke na-achikota nzụlite mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze nke kọntinent ahụ.
1 Nkọwa nke akwụkwọ
1.1 Ntọala nke Macondo
1.2 Mgbanwe ndị ahụ
1.3 Mbibi ahụ
2 Phfọdụ nkebi ahịrịokwu mythical nke "Otu narị afọ nke owu ọmụma"
"Otu narị afọ nke owu ọmụma" ọ na-egosipụta nnọpụiche na nkụda mmụọ nke mmadụ na Buendía saga na eziokwu America na oghere akụkọ ifo nke Macondo. Site na ike ịkọ akụkọ, GG Márquez dị na oge cyclical nke ụbọchị na ihe ndị dị ịtụnanya na-agbagwoju anya.
Ntọala nke Macondo
José Arcadio Buendía na Úrsula Iguarán lụrụ di na nwunye n'agbanyeghị na ha bụ ụmụ nwanne nne. Ha si Riohacha pụọ ​​wee chọta obodo a maara dị ka Macondo.
Mgbanwe ndị ahụ
Obodo a na-enwe agha dị iche iche, mgbanwe gọọmentị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị n'ime ya na mgbanwe na-emetụta ndụ ezinụlọ. Macondo, mgbe ahụ, kwụsịrị ịbụ oghere ifo iji bụrụ oghere mepere emepe.
Di na nwunye ikpeazụ nọ na Buendía saga, Aureliano Babilonia na nwanne nne ya bụ Amaranta Úrsula, nna nwere nwa ezi. Njedebe nke eriri na-eru nso, ebe ọ bụ na nne ga-anwụ mgbe ọ mụsịrị nwa ma ndanda ga-eri nwa ahụ. Aureliano Babilonia wee gụọ akwụkwọ mpịakọta ebe gypsy Melquíades, agwa nke pụtara na mbido akwụkwọ a, dere akụkọ banyere ezinụlọ ya otu narị afọ tupu mgbe ahụ.
Phfọdụ nkebi ahịrịokwu mythical nke "Otu narị afọ nke owu ọmụma"
"Ihe dị mkpa abụghị ịhapụ nghazi."
Aghọtaghị m otu ị si rute oke ịlụ ọgụ maka ihe ndị enweghị ike iji aka gị metụ. "
"M, nke m, naanị ugbu a ghọtara na m na-alụ ọgụ maka mpako."
Kedu ka ụkọ ụmụ nwoke si dị. Ha ji ndụ ha niile lụsoro ndị ụkọchukwu agha ma nyefee ha akwụkwọ ekpere.
"Nzuzo nke ezigbo agadi abụghị ihe ọ bụla karịa nkwekọrịta eziokwu na owu ọmụma."
"Ibe ákwá kasị ochie n'akụkọ ihe mere eme nke mmadụ bụ mkpu ákwá ịhụnanya."
"Don't gaghị anwụ mgbe ị kwesịrị, mana mgbe ị nwere ike."
"Site n'ịgbalị ime ka ọ hụ ya n'anya, ọ mechara hụ ya n'anya."
"Oge ịka anya nwere ike ịbụ ihe ziri ezi karịa ajụjụ ase."
"N'ịbụ onye furu efu naanị ya nke ike ya dị ukwuu, ọ malitere ụzọ ya."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » "Otu narị afọ nke ịnọ naanị" nke GG Márquez n'etiti akwụkwọ ndị kacha agụ
Mgbe niile Don Juan Tenorio, kpochapụwo dị mkpa nke ụbọchị ndị a